I-Acer Iconia Tab A700 isungula ukuba yiThebhulethi yokuqala ye-HD epheleleyo | I-Androidsis
UFrancisco Avila | | Amacwecwe e-Android
Asiyi kuwela kwi-cliché yokubiza ithebhulethi entsha ye-Acer njenge elandelayo «Umbulali we-iPad«, Ngaphandle kwenkwenkwezi ebonakalayo ye I-Acer Iconia Tab A700: yayo 10,1 »umboniso opheleleyo weHD Ngo-1920 x 1200, ngexabiso eliza kuba malunga ne-450 yeedola e-United States, ixabiso elingu-25% liphantsi kune-iPad entsha I-32 GB, Eyimemori yangaphakathi eya kubakho i-Iconia entsha eCES eLas Vegas. Amaxabiso eYurophu azakufumana ukuguqulwa okuqhelekileyo kwedola nge-euro, emile malunga nee-euro ezingama-450.
Ukuqhubeka kwiscreen, kuya kubonelela nge- uxinzelelo lwe-pixel Ngama-55% aphezulu kunamanye amacwecwe e-Android, ahlala exhotyiswe ukuza kuthi ga ngoku ngephaneli ye-1280x800p. ebuninzini. Ngaphandle kwamathandabuzo i iHD epheleleyo kungekudala iya kuba ngumgangatho kumacwecwe e-android. Ukuphucula amava okubukela iividiyo, isikrini se-IPS se-Iconia entsha siyazixhasa ezinye ii-angles zokubukela ngokubanzi.
Ifumaneka ngoku kugcinwa eMelika naseKhanada, iya kufumaneka ngesilivere okanye mnyama, kwaye iya kuxhotyiswa ngumqhubekekisi weNvidia, Icawe3, de Iintsimbi ezine kunye nenye, eya kuthi ikhathalele imisebenzi yangasemva efuna izixhobo ezimbalwa, ukugcina ubomi kwi 9.800 mAh ibhetri., Ngokutsho kuka-Acer, eya kusinika iiyure ezili-10 ezinesiqingatha zokudlala ividiyo, okanye phantse iiyure ezisibhozo zokukhangela kwi-Intanethi.
I-GPU ikwanayo nesiginitsha yeNvidia, iya kuba ne-1 GB ye-RAM, ikhamera engasemva eyi-5 megapixel kunye nephikseli yangaphambili kwinkomfa yevidiyo.
Ngokunxibelelana ngaphandle kwamacingo, i-Iconia Tab A700 idibanisa iGPS, iBluetooth 2.1, iWi-Fi (802.11 b / g / n). I-Acer ihlawule ngokukodwa eli candelo isandi, ukudibanisa iteknoloji IDolby Mobile 3, Nesakhono sokuvelisa isandi kwakhona 5.1 amajelo.
Malunga nonxibelelwano ngokwasemzimbeni, i-Iconia Tab A700 ibandakanya izibuko HDMI encinci, enika abasebenzisi amandla okubonisa iividiyo ezigcinwe kwimemori yangaphakathi (okanye ikhadi microSD) Kwezinye iimonitha kunye neethelevishini. Ngaphezu koko, eli zibuko likuvumela ukuba usebenzise izakhono IDolby 5.1 ngokudibanisa inkqubo yesandi sangaphandle kwithebhulethi.
Unonophelo olukhulu luye lwathathwa yi-Acer kwisandi sesandi esibandakanya i-A700 irekhodi ekhethekileyo yeaudio, kuba idibanisa i-cUkucinywa kwengxolo yangasemva, iluncedo ekurekhodeni iintlanganiso, ukufundwa okanye ukwenza intetho, umzekelo. Isishicileli sikwanikezela nge modo «i konsathi»Yeyiphi ephucula umgangatho wemithombo yesandi kude nendawo esikuyo.
Kwiphambili lazo zonke ezi zixhobo zezi, kunjalo, Android 4.0. Izicelo ezinje ngeOfisi yePolaris 3.5, iEvernote, okanye iPrinta yeAcer, ehambelana nefayile ye- Iipesenti ezingama-87 zabashicileliNgokuka-Acer, inkcaza yokuba ezinye iinkampani kufuneka zisebenze ngaphezulu, ukuba zifuna ukusithengisela iipilisi njengezixhobo zomsebenzi.
Iinkcukacha ezithe xaxe - I-Acer Iconia Tab A700 sele inexabiso eYurophu
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Amacwecwe e-Android » I-Acer Iconia Tab A700: ukumiliselwa okusondeleyo ngomboniso opheleleyo we-HD
Siza kubona ukuba uphuculo lubonakala njani njengoko belusebenzisa, inyani ethembisa ukuba sikhokelwa yividiyo.
Kubonakala ngathi KUCHAZELEKILE ukuba i-ACER ayikhange icinge ngetshaja yemoto yale tablet kunye neGPS. Kubonakala kum njengeSIQINISEKISO SENKONZO !!